iCloud tsy mandeha araka ny tokony ho izy, ary tsy miraharaha azy i Apple | Vaovao IPhone
ICloud dia nandeha nandritra ny taona maro, ary ny tena izy dia mbola ao anaty beta amin'ny ankamaroan'ny lafiny rehetra. Toa tsy mampino fa ny orinasa voalohany nisafidy fitahirizana rahona (ary ny tiako holazaina dia ny voalohany amin'ireo orinasa lehibe), miaraka amin'ny safidin'ny fampitambarana, fitehirizana ary serivisy maro hafa mifototra amin'ny rahona no mbola nijanona ho mikatona indrindra. ny rafitrao, mahita ny fomba fampiroboroboan'ny Google sy Microsoft azy, ary amin'ny safidy malalaka maro izay manintona kokoa hatrany na eo aza ny fihenan'ny vidiny nataon'i Apple taorian'ny fampidirana ny iOS 8 sy Yosemite.
Ny iray amin'ireo ohatra tsara indrindra amin'ny tsy fandehanan'ny iCloud araka ny tokony ho izy dia ny Photos in iCloud. Taorian'ny fanandramana maromaro hampihatra rafitra iray izay mitahiry mitahiry sary ao anaty rahona ho azy, dia toa mifidy ny fampiraisana "mahazatra" izao i Apple, mamela ny fampidinana sary sy horonantsary mandeha ho azy tsy misy fijerena ny daty sy ny mety hidirana amin'izy ireo avy mpizaha Internet rehetra. Hevitra tsy manana zava-baovao fa na eo aza izany dia mbola ao amin'ny dingana Beta raha ny filazan'i Apple tenany ihany. Ary i Steve Jobs ny tenany no nanomboka ity tetikasa sary ity tao anaty rahona, ary mbola miaraka amin'ny Beta izahay.
Olana mitohy amin'ny fampifangaroana ny rakitra, iCloud Drive izay mamafa ny fisie mpampiasa, mpamorona izay mimenomenona fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny serivisin'izy ireo amin'ny serivisy Apple ... Raha fintinina olana be loatra ho an'ny orinasa iray izay matetika tsy manana azy ireo amin'ireo lafin-javatra izay misy fiatraikany mivantana amin'ny mpampiasa. Ary ny fialan-tsiny fa ny firafitr'i Apple ao anatiny dia manakana ny fampandrosoana marina ny iCloud dia tsy mitombina, satria voavaha ao anatin'ny dimy minitra izany amin'ny alàlan'ny fanokanana ekipa iray ho fampandrosoana ny rafitra. Mandra-pahatongan'ny Apple ho matotra ny iCloud, dia hanohy hanao izany izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » iCloud » Tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny iCloud, ary tsy miraharaha azy i Apple
Mikasika izany ihany, misy fomba iray ahafahana manao backup amin'ny iCloud avy amin'ny fitaovana tanana ao amin'ny iOS 8 (Midika aho fa tsy miandry azy io hatao rehefa mampifandray ilay fitaovana amin'ny herinaratra aho)? Tadidiko fa tao amin'ny iOS 7 dia niditra iCloud tamin'ny fikirana / iCloud aho, saingy tao amin'ny iOS 8 dia tsy azoko ny safidy, mbola azoko atao ve?
Eny, mandehana any amin'ny Settings-iCloud-Backup ary azonao atao izany.
Misaotra betsaka anao Luis, tsy tonga tao an-tsaiko ny hijerena io faritra io ao anatin'ny iCloud 😛
Ahoana ny fomba hijerena ny tanjaky ny signal amin'ny iOS 8? (Tsy misy jailbreak)
Mora kokoa ny fikarohan'ireo iPhones vaovao, hoy ny mpampiasa